Mans dick indawo efihliweyo yesondo engaboniyo i-twink isasaza ulutsha olumnyama
Ulusu olucekeceke ukulala phantsi ngaphandle luyakwazi ukwanela » Umgxunya wozuko »Indawo engaboni efihliweyo ngokwesondo
Ndiye ndangena egumbini lokulala kuwo omane. Bendidiniwe. Yayilusuku olude. Isithandwa sam ngeloxesha sasilala phezu kwebhedi. Ndaqala ndayixhoma intamo yakhe de kwaba bubuthongo obomileyo ebusweni bakhe. Ndithe ndisazi ukuba uphaphile, ndamkhawulela - ixesha elide, elixhaphaxhapha, lanyanzela impama - emva koko ndabalekela egumbini lokuhlala.
Kutshanje kusasazwa iividiyo
ILos Angeles ineNdawo yokuZukisa intle eMelika -VICE
Ukuba ubomi besini buyeyona nto ibalulekileyo kwi-ballroom kwaye luhlobo lwayo, abaphathi besikhumba be-kinky babehleli ixesha elide ngasemva, emthunzini, ezizukulwaneni. Kodwa enkosi kwi-Intanethi nakwi-porn giants ezifana neSan Francisco-based Kink. Kwaye ngubani owaziyo? La ngamagama abanzi kolu luhlu kuba, ngokuthe ngqo, baye bafana kakhulu kubantu abaninzi. Kodwa ekubeni ezinye i-kinksters kinky abantu zigxininisa umahluko wazo, siya kuzichaza ngokwahlukileyo.
Yeyiphi eyona mbono yakho ingendawo ungakaze uxelele mntu?
Ifoto ngu-Igor Madjinca ngokusebenzisa iStocksy. I-Orgies ifumana i-rap embi. Utyelelo lwam lokuphononongwa kwiintaka zesondo zikuqinisekisile oku. Ngaphandle kokutshintsha rhoqo iipikniki ze-dick kunye nabantu abangabaziyo baseBritane nge-Snapchat, ndiyinto encinci yesondo. Ndiyawuthanda umsebenzi o-rim kunye nomthunywa wevangeli, kodwa amaxesha amaninzi ibhonasi yam iye yathatha indawo, kwaye ndaye ndagqibela kwiindawo ezinesondo esidlangalaleni, apho ndabona khona stereotypes ebomini.
Kwakukho amawaka eempendulo kulo mbuzo, jonga ukuba izinto zakho ezintle uyithelekisa njani nabaphenduli bophando. Ngoku yonke into endicinga ngayo kukuba neentlobano zesini kunye naye kwisitya sokuzilolonga. Kukwimeko yenyani yokudlwengula.
Iimpawu: Indawo + emfamfithiweyo + yesini + ngamehlo + twink + split
SE EU TIVESE LÁ ESSE PAU IA BAIXAR RAPIDINHO!
Kulungile ... umpompe i-cum kwi-esile lakhe.
Ipasivofit | 09.02.2019
ndingathanda ukuba nayo yonke loo ntombazana intle ibaleka umqala wam ---- yummmmmm